2012-06-03 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
IDM 6.11 Build7(latest version) with (3 cracks and 1 keygen)
​တောင်း​ထား​တာ​တွေ ​အား​လုံး​ထဲ​က IDM ​ကို ​ပြန်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အ​ထဲ​မှာ crack3​ခု​နဲ့ keygen 1 ​ခု​ပါ​ပါ​တယ်. ​ကြိုက်​တဲ့​ဟာ​နဲ့ ​သုံး​ပြီး license version ​လုပ်​ပါ။ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်။ ​မျက်​မှန်​နဲ့ patch ​က ​ပို​ပြီး​တော့ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်။ ​ကဲ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ ​တယ်။ ​တောင်း​ထား ​တာ​တွေ​ကို​တော့ Download ​လုပ်​ထား​ပြီး​ပါ​ပြီ. ​တင်​ပေး​ဖို့​ပဲ ​ကျန်​ပါ​တော့​တယ်။
Mediafire | ifile | Minus
IDM 6.11 Build7(latest version) with (3 cracks a...